‘कोरोना यति छिटै निमूल हुँदैन, जिवन यसरी जोगाउनुहोस्’ : कोरोनाबाट बच्न विश्व स्वासथ्य संगठनले दिएको यि ५ उपाय – Butwal Sandesh
‘कोरोना यति छिटै निमूल हुँदैन, जिवन यसरी जोगाउनुहोस्’ : कोरोनाबाट बच्न विश्व स्वासथ्य संगठनले दिएको यि ५ उपाय
काठमाडौं । चीनवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी फैलिएको छ । यशियाका देशमा अहिले यसले प्रभाव पारेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र नेपालमा पनि यसको प्रभाव निकै बढी देखिएको छ । अमेरिकामा लाखौंले ज्या*न गु*माइसकेका छन् ।
कोरोनाको भ्याक्सिन नआउँदा सम्म कोरोना संगसंगै मानिसले आफ्नो जिवन चलाउनु पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सजगता अपनाएर काम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव दिएको हो । मानव जीवनकै अस्तित्व सं*कटमा पार्न खोजिरहेको यस भाइरबाट बच्न डब्लूएचओले व्यक्तिगत तवरबाट गर्न सकिने केही सुझाव दिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसै साता गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड विरुद्ध व्यक्तिले कसरी लड्ने भनेर विभिन्न ५ टिप्स दिएको छ । डव्लुएचओका प्रमुख डा अधानोम टेड्रोसले भनेका ५ उपाय यस्ता छन् ।
१. स्वस्थ र पौष्टिक आहार खानुहोस्। जसले तपाईँको रो*ग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ठीकसंग कार्य गर्न सहयोग गर्दछ ।
२. म’दि’राज्य पदा’र्थको से’वनलाई सीमितमा राख्नुहोस् । गुलिया पेय पदार्थहरु नलिनुहोस् ।
३. धू’मपान नगर्नुहोस् । यदि तपाईँ कोरोना भाइरस (कोभिड१९) बाट सं*क्रमित हुनु भयो भने धूमपानले ग’म्भीर रोगको जो*खिम बढाउन् सक्छ ।
४. शारीरिक व्यायम गर्नुहोस् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले भने झैँ बयस्कहरुले दैनिक कम्तिमा ३० मिनेट र बच्चाहरुलाई दैनिक १ घण्टा शारीरिक व्यायम गर्न गराउनुहोस् । यदि तपाईँलाई यो बेला नियमक निकायले अनुमति दिएको छ भने बाहिर पैदल यात्रा गर्नुहोस, दौडनु होस, सवारीमा समेत जानुहोस तर अरुसंगको दूरी राख्नुहोस ।
यदि तपाईँ घरभित्रै लकडाउन अर्थात बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन् भने व्यायम गर्नुहोस्, नाच्नुहोस्। योगा गर्नुहोस् । घरमै बस्नु भएको छ काम गरिराख्नु भएको छ भने लामो समय एउटै आसनमा नरहनुहोस् । तपाईँले कम्तिमा हरेक ३० मिनेटमा ब्रेक लिनुहोस् । घरमा कसरी स्वस्थ रहेर बस्ने भन्ने बारेमा हामी आउने दिनमा पनि सल्लाह दिनेछौँ ।
५. तपाँईको मानसिक स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोस् । यो संकटको बेला त*नाव अलमल र डराउनु सामान्य कुरा हो । यस्तो बेलामा तपाईँले आफ्ना चिनजान र विश्वासिला व्यक्तिसंग कुरा गर्नुहोस् । संगीत सुन्नुहोस, किताब पढनुहोस् अथवा गेम खेल्नुहोस् ।